Kawlram Thuhla Thawn Pehpar In Senator Mitch McConnell Cun U.S Congress Ah President Biden In Thu A Thunlut Tul Tiah Sim. – My News
Kawlram Thuhla Thawn Pehpar In Senator Mitch McConnell Cun U.S Congress Ah President Biden In Thu A Thunlut Tul Tiah Sim.
admin May 27, 2022 LeaveaComment on Kawlram Thuhla Thawn Pehpar In Senator Mitch McConnell Cun U.S Congress Ah President Biden In Thu A Thunlut Tul Tiah Sim.
25th May, 2022 ah Senator pawl le U.S cozah upa pawl hnenih thusimnakaneihlai ah Senate ih Republican hruaitu, Senator Mitch McConnell cun “Kawlram ih Democracy hrang dothlennak ah U.S ih dinpinak le bawmnak athupi zia, Kawlram mipi pawl bawm theinak dingah ziangvek thil pawl hihnak ih tuahsin sehla tiah President Biden cozah in ziang tin timtuahnak an nei tihi theihthei dingah kan beisei” tiah asim.
McConnell cun thla (16) sung ralhrang uknak tangah mipiathawng in an thi ih mawh neilo mipi tampi kaih le thawng thlak an tuar thukhal asim bet. U.S cozah ih Kawlram thuhla tlunah arang theibik in tuansuahnak/ cangvaihnak pawl cu Congress ah an thunlut ding kan hngak hlap tiahasim. Anih hi NUG Kumpi, Foreign Minister Daw Zin Mar Aung thawn khal tonkhawmnak nei dahtu asi.
မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုတွေ လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကို အမေရိကန် သမ္မတ ဘိုင်ဒင်ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရက လွှတ်တော်ကို အစီရင်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီး မေ ၂၅ ရက်ကပြုလုပ်တဲ့ အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေ ကြားနာမှုအတွင်းမှာ အမေရိကန်အစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရှိတွေကို မိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာ အထက်လွှတ်တော် ရီပါပလစ်ကန် ခေါင်းဆောင် မတ်ကော်နယ်က အခုလို ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ထောက်ခံပံ့ပိုးမှုအခန်းကဏ္ဍဟာ အလွန် အရေးကြီးတဲ့ လမ်းဆုံလမ်းခွကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒီနေ့မှာ ကျနော်နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များထံမှ မြ န်မာပြည်သူများကို ကူညီဖို့ ဘယ်အရာတွေကို ပိုပြီးတိုးမြှင်လုပ်ဆောင်ဖို့ ပြင် ဆင်ထားသလဲဆိုတာကို ကြားနာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။” လို့ မတ်ကော်နယ်က ပြောပါတယ်။
ဒါအပြင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ ၁၆ လတာ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ ပြည်သူတွေ ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ သေဆုံးခဲ့ရသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား ရှောင်တာနယ်တို့ပါအဝင် အပြစ်မဲ့ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာ ဖမ်းဆီး ခံထားရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ထောက်ပြပြောကြားထားပါတယ်။
မတ်ကော်နယ်အနေနဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်သူ ဒေါ်ဇင်မာ အောင်နဲ့လည်း တွေ့ဆုံထားပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက်တွေကိုလည်း ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက်တွေကို သမ္မတ ဘိုင်ဒင်ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ မ ဟာဗျုဟာကျကျ ပြင်ဆင်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခြင်းစီ အောင်မြင်ပေါက်မြောက်စေရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ အတွက်လည်း မျှော်လင့်တယ်ဆိုပြီးလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အထက်လွှတ်တော် ရီပါပလစ်ကန် ခေါင်းဆောင် မတ်ကော်နယ်ကတော့ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ မြန်မာအရေးပေါ် စီစဥ် ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ ပ တ်သက်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ကို အစီရင်ခံမှုတွေကို စောင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောကြားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
Mindat township awptu pawlin mipui school-ah chiah naupang school luhtir turin thuchhuah an siam →
← NUG Pay mobile Application, June thla atanginahman theih dawn